အတွေးအမျှင်တန်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Society & Lifestyle » အတွေးအမျှင်တန်း
Posted by weiwei on Feb 24, 2011 in Society & Lifestyle | 20 comments
ဒီကနေ့ အလုပ်ထဲက မိတ်ဆွေတစ်ယောက်နဲ့အတူ သူ့အိမ်အတွက် အိမ်အကူ (အိမ်ဖော်)တစ်ယောက် အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာနဲ့ အိမ်ဖော်အရှာထွက်ကြပါတယ်။ ကျွန်မက ဘေးက အဖော်လိုက်ပေးရုံသက်သက်ပါပဲ။ ကရင်ခြံလို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာ အိမ်အလုပ်လုပ်တဲ့ ကရင်အမျိုးသမီးလေးတွေကို ခေါ်လို့ရတယ်လို့ သတင်းကြားလို့ အဲဒီကို အရင်သွားစုံစမ်းကြတယ်။ ဟိုရောက်တော့ တာဝန်ခံအမျိုးသမီးက လောလောဆယ် ပေးစရာ ကောင်မလေးမရှိသေးဘူးတဲ့။ လိုချင်သူကများပြီး လုပ်မဲ့သူက နဲနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဈေးနှုန်းကို စုံစမ်းကြည့်တော့ အိမ်ရှင်အရေအတွက်ကိုကြည့်ပြီး ဈေးတောင်းပါတယ်တဲ့။ အနဲဆုံးကတော့ တစ်လလေးသောင်း၊ ကလေးထိန်းသီးသန့်ငှားရင် ကလေးတစ်မျိုးထဲပဲ ထိန်းပြီး တစ်လကို ၇ သောင်းကနေ တစ်သိန်း နှစ်သောင်းအထိ ပေးရမယ်တဲ့။ အထွေထွေအလုပ်အတွက် ငှားရင်တော့ ကလေးမထိန်းပေးဘူးတဲ့။ အဲဒါတောင်မှ လူမရှိလို့ နောက်မှဆက်သွယ်ပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ ကျွန်မတို့လဲ အင်းစိန်ဘက်က ပွဲစားတစ်ယောက်ဆီကို သွားစုံစမ်းကြပါတယ်။ အဲဒီရောက်တော့ ပွဲစားက လောလောဆယ် လူမရှိသေးဘူးတဲ့။ ရွာကနေကောင်မလေးတွေ ရောက်လာရင် အကြောင်းကြားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ အနဲဆုံး တစ်လလေးသောင်းကျပ်ဖြစ်ပြီး ပွဲစားခက တစ်လစာပေးရမယ်တဲ့။ ဘာအာမခံချက်မှမရှိပါဘူး။
ကျွန်မတို့လဲ စိတ်ပျက်ပျက်နဲ့ ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မမိတ်ဆွေက အိမ်အလုပ်ကို လုံးဝမလုပ်နိုင်လောက်အောင်မအားမလပ်ဖြစ်ပြီး လူမမာအမေတစ်ယောက်လဲရှိနေတော့ အိမ်ဖော်အသဲအသန်လိုချင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အ၀တ်လျှော်ဖို့ တစ်ခါခေါ်တာတောင် အ၀တ်များရင် ၃၀၀၀ ကျပ်ပေးရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ တစ်အိမ်လုံးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ချင်လို့ တစ်ခါခေါ်ရင် ၂၀၀၀ ကျပ်ပေးရပါတယ်။
ကျွန်မ ဆက်တွေးနေမိတာက ဆင်းရဲတဲ့ ပြသနာပါ … ထမင်းစား စရိတ်ငြိမ်း တစ်လ ငါးသောင်းဆိုတာ နဲတဲ့ ပမာဏတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့ လုပ်ချင်တဲ့သူ နဲနေရတာလဲ … ကလေးထိန်းအလုပ်ဆိုတာလဲ ကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုပါပဲ … စားပြီးသောက်ပြီး သိန်းချီရတာကို ဘာလို့ မလုပ်ချင်ဖြစ်နေကြတာလဲ …
ကျွန်မရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို ပြောပြမိတော့ .. ရွာတွေမှာ တစ်လ ငါးသောင်းလောက်က အသာလေးရှာနိုင်ပါတယ်တဲ့ .. အဲဒါကြောင့် ရန်ကုန်လာပြီး အိမ်ဖော်လုပ်မဲ့သူ ရှားနေတာ ဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ …
နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ဗမာလူမျိုးတွေက အိမ်ဖော်ဆိုတဲ့အလုပ်ကို သိမ်ငယ်တဲ့အလုပ်လို့ထင်ပြီး မလုပ်ချင်ကြတာ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ပြောတယ် ..
ကျွန်မကတော့ အဲဒီကိစ္စကို တစ်နေကုန် အတွေးမျှင်တန်းနေမိပါတော့တယ် ….
အတွေးအမျှင်တန်း တာတော့ မပြောနဲ့.. စိတ်ပျက်စရာတွေ အများကြီး ကြုံခဲ့ရဘူးတယ်။
ဒီနေရာမှာ အမေးလေးရှိလို့ အဖြေလေးတစ်ခုလောက်ပြောပါရစေ
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်မှာ လတ်တလောလေးတင် ဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ အိမ်ဖော်နဲ့ အိမ်ရှင်အဖြစ်မျိုးတွေက Physical ပိုင်းဆိုင်ရာ နာကျင်မှုပါ၊ အိမ်ဖော်လုပ်ခြင်းကြောင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သိမ်ငယ်မှု၊ နိမ့်ကျမှုတွေပါ များစွာရှိနေတဲ့အတွက် ဒီလုပ်ငန်းကို မြန်မာလူမျိုး မိန်းကလေးတွေ မလုပ်လိုကြခြင်းလို့ မြင်ပါတယ်…။ ဒီလိုအလုပ်ကို မလုပ်တဲ့အတွက် ဆင်းရဲကြတာလားလို့တော့ မတွေးစေလိုပါဘူး.. ဘယ်သူမဆို အလုပ်ချိန်ပြီးရင် လွတ်လပ်စွာနေလိုကြတာပါပဲ… အိမ်အကူအလုပ်ဆိုသည်မှာ ၂၄ နာရီ တာဝန်ရှိနေတဲ့သဘောသက်ရောက်သလို ရှေ့ရေး မျှော်တွေးစရာမရှိတဲ့အလုပ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်.. ဒါကြောင့် ဆင်းရဲတဲ့သူတွေက ဆင်းရဲနေကြခြင်းဟာ ဒီအလုပ်မလုပ်ခြင်းကြောင့်လို့တော့ မတွေးစေလိုပါဘူး
(သဘောမကျတာလေးတစ်ခုတွေ့တဲ့အတွက် ၀င်ရောက် ဆွေးနွေးပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်.. အန်တီဝေကို ပုတ်ခတ်ခြင်းမဟုတ်ပါ.. )
ဟုတ်ကဲ့ … ဆင်းရဲတာနဲ့ အိမ်ဖော်အလုပ်ကို တွဲပြီးပြောခြင်းမဟုတ်ပါဘူး ..
နောက်ဆုံး ဘာမှလုပ်စရာအလုပ်ရှာမရရင်တောင်မှ အငတ်ခံနေစရာမလိုပါဘူးလို့ တွေးမိရုံတင်ပါပဲ …
အပွင့်လင်းဆုံးပြောရရင် ဒီအိမ်ဖော်လုပ်ငန်းဆိုတာက လဲ ၀န်ဆောင်မူ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဘဲ။
ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်မှာတော့ အိမ်ဖော်ဆိုတဲ့ လူတန်းစား ကို အတော်များများက
မနက်မိုးလင်း အိပ်ယာထကနေ အိပ်ယာဝင်ထိ အလုပ်နဲ့လက်နဲ့မပြတ်ခိုင်းလိုခိုင်း
ရုပ်ရှင်တွေပြဇာတ်တွေမှာ အနှိမ်ခံ အဖိနှိပ်ခံတွေအဖြစ်သရုပ်ဖော်လိုဖော်ဆိုတော့
အိမ်ဖော်အလုပ်ဆိုတာ နိမ့်ကျတဲ့ဘ၀ဆိုပြီး လူတွေသတ်မှတ်ကုန်ပါတယ်။
နောက်အိမ်ဖော်ဘက်က ဆိုးတာလဲ ရှိနိုင်ပါတယ်။
သူတို့ခံရတာများတာကို ပြန်လည်တုန့်ပြန်တဲ့နေရာမှာ ပညာတတ်လူတန်းစားမဟုတ်တော့
တုန့်ပြန်တဲ့နည်းတွေက အမှားတွေဖြစ်နေတော့ သူတို့ဘဲနာမယ်ဆိုတွင်ကုန်တာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊
ဒါက ကျွန်တော့် အမြင်နော်
ခေါ်တာကိုကအိမ်စေပါ စားရင် လည်းသခင်စားပြီးမှ
မှာပါ အိမ်အကူကတလ စရိတ်ငြမ်း၅၀၀၀၀
ထက် ဈေးရောင်းကိုယ့်စရိတ်နဲ့ကိုယ် ၃၀၀၀၀
အခုရန်ကုန်မှာလဲ ခေတ်မှီနေပါပြီ … အလုပ်ရှင် အလုပ်သမားပုံစံ ဆက်ဆံတာ ရှိနေပါပြီ … ဒါကိုလဲ အလုပ်အကိုင်တစ်ခုကို သဘောထားနိုင်ကြရင် ရေရှည်မှာ မျှော်လင့်ချက်တွေ ရှိလာတော့မှာပါ …
သူဌေးတွေဆီမှာ အလုပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ် … သူတို့အိမ်မှာ စာရိတ္တကောင်းကောင်းနဲ့ အလုပ်လုပ်ပြနိုင်ရင် ရှေ့တက်လမ်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ် ..
လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်လောက်က ကျွန်မအသိတစ်ယောက် အစိုးရအလုပ်နဲ့ အမေရိကန်ကို ၃ နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ် … သူ့အိမ်က အိမ်ဖော်ကောင်မလေးကို ခေါ်သွားချင်တယ် … တစ်လ တစ်သိန်းအိမ်ကို ထောက်ပံ့ပေးမယ် .. ဒါပေမယ့် ၃ နှစ်အတွင်းတော့ ပြန်လာလို့မရဘူး … အဲဒါကိုတောင်မှ အဲဒီကောင်မလေးက သူ့ရည်းစားကို မခွဲနိုင်လို့ လိုက်မသွားခဲ့ဘူး … ယောက်ျားပဲယူတော့မယ်ဆိုပြီး နေခဲ့လိုက်တယ် …
ဘာတလတသိန်းဟုတ်စ.. အန်တီဝေ၊ ပေးတာမများလွန်းဘူးလား။
ယူအက်စ်မှာ တနာရီအနိမ့်ဆုံးလုပ်ခ ၇ကျပ်ရှိတယ်။ အိမ်ရှင်က မြန်မာပြည်ကလာသူဆိုတော့ တနေ့ကို အနည်းဆုံး၁၀ရီ အထက်ခိုင်းမယ်၊ အိမ်မှုကိစ္စအကုန်လုပ်ရမယ်၊ ခလေးရှိရင်ထိန်းရမယ်။ မရှိရင်လည်း ယူအက်စ်မှာမွေးလိမ့်မယ်။ ဒီတော့တနေ့ကို အနဲဆုံး၇၀နဲ့ (သာမန်နာရီလုပ်ခနှုန်း) တလကို ၂၀၀၀ကျော်တန်တယ်။ ယူအက်စ်ရောက်ရင် ပျောက်မှာစိုးလို့ဆိုပြီး အိမ်ဖော်ရဲ့ပတ်စ်ပို့ကို အိမ်ရှင်များက သိမ်းထားမယ်။ ဘယ်မှလဲပေးမထွက်ဘူး။ နယ်မြို့ဆိုရင် ဘယ်သွားသွားကားလိုလို့ ခိုးထွက်တောင် ဘယ်သွားရမှန်းသိမှာမဟုတ်ဘူး။ သုံးနှစ်လုံးလုံးကျွန်ခံ၊ ခိုင်းသမျှလုပ်၊ ကျွေးတာစား နှစ်ပြည့်ရင်လည်း မသေချာ၊ အချိန်ထပ်ဆွဲ ဒါမှမဟုတ် တလကို ငါးရာ တထောင်လိုမျိုး ပေးပြီးဆက်ခိုင်း၊ ဒါမှမဟုတ် သူများကို အဲသလို အောက်ဈေးနဲ့လွှဲခဲ့။ ဥပဒေကြောင်းအရ လွတ်လမ်းရှိပေမဲ့ အိမ်ဖော်ကိုယ်တိုင်ကလဲ နဂိုထဲကမှ မစွမ်းလို့ သူများဆီမှာ အိမ်ဖော်လုပ်ရတာလေ၊ နိုင်ငံခြားရောက်တော့လဲ သုံးနှစ်သုံးမိုး မျက်စိနားပိတ်၊ မပြောတတ်မဆိုတတ်နဲ့ လှောင်အိမ်ထဲက လွတ်တာတောင် အတောင်သေပြီမို့ ပျံနိုင်ပါတော့မလား။ ပြီးတော့လည်း ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် တသက်လုံးအပြောအဆို ခံရနိုင်သေးတယ်။ ဘယ်လိုသဘောတူချက်ရှိခဲ့ရှိခဲ့ ပြဌာန်းဥပဒေနဲ့ မညီရင် ခိုင်းစေသူကို အလုပ်သမားဥပဒေနဲ့ရော လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေအရပါ အရေးယူနိုင်ပါတယ်။ ကံဆိုးရင် လူမှောင်ခို၊ အဓမ္မအလုပ်ခိုင်းစေမှုပါ အကြုံးဝင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အိမ်ဖော်ကို ကိုယ့်နိုင်ငံကခေါ်ချင်ရင် တန်ရာတန်ကြေး ဥပမာ သိန်းတရာတန်ဖိုးဖြတ်ပြီး ပေးရမဲ့လုပ်ခကို ကိုယ်ပေးတဲ့ စပွန်ဆာကြေးလို တန်ဖိုးထားဖြတ်ပါ။ ငယ်ရွယ်သူဆိုရင် သူ့ဘဝရှေ့ရေးအတွက် ကျောင်းတက်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရပ် သို့မဟုတ် ဘာသာစကားသင်တန်းတခုခု စဉ်းစားပေးပါ။ အိမ်ဖော်ခလေးထိန်းဆိုတာ သက်ကြီးသူများနဲ့ ကျောင်းသူများသာ အချိန်ပိုင်း ဝင်ငွေရအောင် လုပ်လေ့ ရှိပါတယ်။
Australia, New South Wales State, Minimum Wage :
minimum wage = 15.00 Australia $ per Hour.
( By Law from from 1 July 2010.)
1 Australia Dollar = 0.99 US Dollar ( Today Rate )
၁၉၉၇ ဝန်းကျင်လောက်တုန်းက ကရင်ခြံဘက်ကိုရောက်ဖူးတယ်၊ သူဋ္ဌေးအိမ်အတွက် အိမ်ဖော်ရှာတဲ့ကိစ္စပါဘဲ။ ဒေါ်ဝေပြောသလို အဝတ်လျှော်ရင် ဘယ်လောက်၊ ခလေးထိန်းရင် ဘယ်လောက် ဆိုပြီး သူ့ အပိုင်းအပိုင်းအလိုက် ဈေးတောင်းတယ်။ အကြမ်းဖျင်း ကိုယ်တွေတွေးတာက အိမ်ဖော်ဆိုတာကိစ္စအတော်များများအတွက် လစာ ဘယ်လောက်အပြီးစီးဆိုပြီးတွက်ထားတာ၊ နေ့ ခင်း အလုပ်လာလုပ် ညခင်း ကရင်ခြံ ပြန်ဆိုတာတောင်ရှိလိုက်သေးတယ်။ သူတို့ တွေကလည်း ဒီအလုပ် လုပ်လာတာကြာပြီလေ၊ တနေရာထက် တနေရာ လစာပိုရခဲ့တဲ့ အတိုင်း တောင်းလိုက်တဲ့ဈေးက သူဋ္ဌေးကိုယ့်ကိုပေးတဲ့လစာထက် ပိုတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာသာ အိမ်ဖော်အလုပ်၊ အမှိုက်ကြုံးအလုပ်ကို သိမ်ငယ်တယ်လို့ ထင်နေကြတာ၊ ဒီမလေးရှားမှာဆိုရင်တောင် အဲ့ဒီအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့သူတွေအများကြီး၊ အိမ်ရှိတယ် ကားရှိတယ်၊ လစဉ်အရစ်ကျဆပ်နိုင်တယ်။ ဘယ်သူမှ အထင်သေးမနေဘူး၊ “စားစရာမရှိ ဘယ်သူလာကျွေးမှာတုန်း” တဲ့။
ဒီတစ်ခါက် ကွန်မန့်မှာ နီသွားတဲ့အတွက် တစ်ကယ်စိတ်မကာင်းပါဘူး
Dislike ခဲ့သူကို မေးချင်ပါတယ်.. ဘာအတွက်ကြောင့်ဆိုတာ ရှင်းပြခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်လဲ ပြင်လို့ရတာပေါ့
အိမ်ရှင်-အိမ်ဖေါ် ဆက်ဆံမှုကနေ… အလုပ်ရှင်-အလုပ်သမား ဆက်ဆံမှုပုံစံကို ပြောင်းဖို့လိုနေတယ်ထင်ပါတယ်..။
အခုဟာက ..အိမ်ရှင်ကပဲ.. မေတ္တာတွေထားပြီး ..သဘောထားကြီးရင်..အလုပ်သိပ်မခိုင်းရင်.. ကောင်းနေသလိုလို..
ဘယ်လိုမှလက်ဆုပ်လက်ကိုင် ပြမရတဲ့.. မေတ္တာတွေ..သစ္စာတွေကို .. စီးပွားရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်တာမှာ.. အခြေခံထားပြနေပြန်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်..။
တကယ့်မသိစိတ်ထဲမှာက …ကျွန်-သခင် ရှေးရိုးစွဲကို တွယ်တာနေတာပါပဲ..။ ကိုပေါက်ပြောသလိုပဲ.. ရုပ်ရှင်တွေ..၊ဗီဒီယိုတွေမှာ .. စိတ်တွေပေါ်နေတာ အသိသာကြီးပါ..။
နောက်ပြီး.. အိမ်ဖေါ်တွေမှာ … အခြေခံအလုပ်သမားအခွင့်အရေးလည်း ရပုံမရှိပါဘူး.။
အိမ်ဖေါ်တွေအလုပ်ချိန်ဟာ .. သာမန် အလုပ်သမား အလုပ်ချိန် ၈ နာရီထက်လည်း ပိုနေတယ်ထင်ပါတယ်..။
အိမ်ဖေါ်နဲ့ နာနီ(ကလေးထိန်း) အလုပ်လည်း ပြတ်ပြတ်သားသား ခွဲပြီးထားသင့်တယ်ထင်ပါတယ်..။
နာနီ ဆိုတာက.. လိုင်စင်နဲ့ သေသေချာချာ လုပ်ထားသင့်တယ်ထင်လို့ပါ..။ ကလေးအသက် သူ့..အပ်ထားရတာကိုး..။
အိမ်ဖေါ်တွေကလည်း.. အ်ိမ်ရှင် ကောင်းကောင်းလိုချင်တယ်..။
ဒီလို ..နေရာမျိုးမှာ.. ကြားခံပွဲစားမလိုပါဘူး..။
အိမ်ဖေါ် ယူနီယံ(သမဂ္ဂ) ၊ ၀န်ဆောင်မှု အေဂျင်စီတွေ လိုနေပြီဖြစ်ပါကြောင်း…။
ကိုရင်စိုင်း ပြောတာကို ထောက်ခံပါကြောင်း…. (အစ်ိမ်းတခုပေးလိုက်တယ်နော..။)
စီးပွားရေးလုပ်ချင်သူတွေ.. ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းလုပ်သင့်တယ်..။
အိမ်ဖေါ်တွေကို ဖယ်ရီနဲ့ မနက် ၉နာရီ..အိမ်တွေလိုက်ချပေး.။ ညနေ ၆နာရီ ပြန်ခေါ်ပြီး အိမ်(သို့)အဆောင်ပြန်ပို့ ပေး..။
မတရားတာတွေ့ရင် .. ဥပဒေကြောင်းအရ..တရားစွဲပေး..။
အိမ်ရှင်.ပစ္စည်း အလစ်မသုတ်ခံရအောင် ..အာမခံပေး..။ စသဖြင့် နိုင်ငံခြားက အေဂျင်စီတွေကို ကော်ပီကူးပြီး မြန်မာမှု ပြုသင့်တယ်..။
အောက်မှာ .. အိမ်ဖေါ်တွေအလုပ်နဲ့ ..၀န်တောင်မှုအေဂျင်စီလင့်တွေပေးထားတယ်..။ ၀ါသနာပါသူတွေ သွားကြည့်ကြပေါ့..
# A housekeeper cleans all rooms to which she is charged or assigned. She dusts, sweeps, mops, vacuums and scrubs. She maintains all cleaning supplies and equipment. She makes beds. She does laundry. She irons clothes. She washes windows. She maintains compliance with the regulations of the Occupational Safety & Health Administration (OSHA). She works under the direction and policies of her employer. She may serve as the nanny foraprivate family. She may grocery shop and do some cooking as well.
# Housekeepers are employed private residences, by property management firms, in hospitality facilities and by cleaning companies. A candidate seeking this type of employment can apply directly to the company for which he would like to work. He may find these jobs advertised in the classified section of his local newspapers. Housekeeper jobs are also posted on online job search boards such as monster.com, jobs.com and careerbuilder.com. Professional organizations such as the International Executive Housekeeper Association provide resources and networking opportunities for those seeking employment. He may also find success using the services of an employment agency that specializes in the placement of domestic professionals
# To beasuccessful housekeeper,acandidate must be dexterous, able to lift or move heavy furniture. She must be able to stand for long periods of time. She must be able kneel, crouch and/or crawl. She must be able to work around chemical cleaning solutions. She must know how to properly use cleaning equipment such asavacuum cleaner. She must be self-motivated and able to complete her tasks with little or no supervision.
# No formal education is required to work asahousekeeper. The successful candidate must have knowledge of cleaning and sanitation products. He must also understand how to properly clean sensitive materials such as wood without damaging them.
According to Salary.com, in 2009 the average housekeeper working in the United States earns an annual base salary of $21,196. The United States Bureau of Labor Statistics anticipates the employment of building cleaning workers to increase by 14 percent within the decade of 2006 through 2016.
Read more: Housekeeper Job Descriptions | eHow.com http://www.ehow.com/about_5339650_housekeeper-job-descriptions.html#ixzz1EvA89Qft
ဆြာခိုင်ကို ထောက်ခံပါတယ်။ ဖြစ်လာရင် အကောင်းဆုံးပေ့ါ။
သဂျီးပြောသလို တနေ့ရှစ်နာရီအလုပ်ချိန်ဆိုတာတော့ ဖြစ်ဖို့စောပါသေးတယ်။ ပြည်တွင်းကုမ္မဏီ ရုံးအလုပ်အတော်များများမှာတောင် စနေနေ့ပါဆင်းကြရတာမဟုတ်လား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အလုပ်ချိန် သတ်သတ်မှတ်မှတ် စည်းကမ်းကလနားနဲ့ ပြဌာန်းပေးဖို့သင့်ပါပြီ။ ကရင်ခြံမှာလို ကိုယ့်လူကို အကာအကွယ်ပေးထားတာ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ခက်တာက တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးဗျ၊ ပြောလိုက်ရင် စစ်ခွေးလဒူငဖါးတွေက နိုင်ငံရေးစကားလို့ ကန့်ကွက်လိမ့်မယ်။ အိမ်ဖော်အတော်များများမှာ အလုပ်ချိန်သတ်သတ်မှတ်မှတ်မရှိဘဲ မနက်စောစောထပြီး ညမိုးချုပ်မှ အိပ်ရတာ၊ ကြားထဲမှာ နားရတယ်ဆိုပေမဲ့ အမြဲတမ်း stand by နေရတာလေ။ ဘယ်သူလုပ်ချင်မလဲ။ ကိုယ်ပိုင်အချိန်မှာ ကိုယ်နေချင်သလို လွတ်လွတ်လပ်လပ် နားချင်တာပေါ့။ အိမ်ရှင်ဖက်က ကြည့်ပြန်တော့လည်း သူ့အားချိန်မှာ လွှတ်ပေးထားလို့ လူလည်ငရှုပ်နဲ့တွေ့ပြီး ဗိုက်တလုံးနဲ့ ကျန်ခဲ့ရင် မခက်လား။ တွေ့ဖူးတဲ့လူရှုပ်၊ ဖါဆွယ်များက မအူမလည် အရွယ်ကောင်း အိမ်ဖော်များကို ပစ်မှတ်ထားတယ်လေ။ အခုလည်း မြန်မာပြည်မှာ လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ မော်ဒန်ကုမ္မဏီတွေရှိနေပြီဆိုတော့ အိမ်တွင်းဝန်ဆောင်မှု၊ အိမ်တိုင်ယာရောက်ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှု ပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေ ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။
အလုပ် လုပ်တဲ့ မိခင် နောင်ဆိုပို များ လာ ဖို့ပဲရှိ တယ် ။ စည်းကမ်းဥပဒေ နဲိ့daycare center တွေဖွင့် ဖို့ လုပ်သင့် တယ် ။ လူတယောက် ကို ၂၄ နာရီ ခိုင်း တာ လဲ မသင့် ဘူး လို့ထင် ပါ တယ် ။
တချို့လူတွေ စာဘယ်လို သင်သင် မတတ်ဘူး။
အိမ်မှာ ၂ယောက် ကြုံဘူးတယ်။ သူတို့ မေးတော့ အတန်းပညာ ၃တန်း နောက် တယောက်က ၅တန်း ဆိုလား ပြောတယ် ညာပြောတာ ထင်တာဘဲ ၅တန်း ဆိုတာ.. စာတလုံးမှ မရေးတတ် မဖတ်တတ်ဘူး။ သူငယ်တန်း ဖတ်စာအုပ် ၀ယ်ပြီးတော့ သင်ပေးတယ်။ အကြမ်းဖျင်း ဖတ်တတ်အောင် ဒီနေ့ သင် နက်ဖြန်မေ့ တခြား ဈေးတွက် တော့ ကောင်းကောင်း တွက်တတ်ကြတယ်။ စာလုံးတွေ မှတ် နိုင်တဲ့ မှတ်ဥာဏ် မရှိကြဘူး ထင်တယ်။ သူငယ်တန်း ဖတ်စာ ကို နေ့တိုင်း သင်ပေးတာ ၁နှစ်လောက် နီးနီ သင်ပြီးတဲ့ အထိ ဖတ်စာ ၁၅ ၁၆ ကနေ မတက်ဘူး။ ပြန်ကျော့လိုက် ပြန်သင်လိုက်နဲ့.. နောက်ဆုံး စိတ်ညစ်လို့ သမီး မသင်ချင်တော့ပါဘူး ဆိုပြီး လာပြောတယ်။ ဆရာ သိက္ခာချတဲ့ တပည့်တွေ။ တလုံးမှ မတတ်ကြဘူး။ နာရီ အချိန် ကောင်းကောင်း ကြည့်တတ်တယ်။ စာမဖတ်တတ်တာ က လွဲရင် ဈေးဝယ်ရင်လည်း ကောင်းကောင်း ၀ယ်တတ်တယ် မမှားအောင် ကို ၀ယ်တတ်ကြတယ်။ ဘုရားစာ သင်ပေးထားရင်လည်း ရတယ် အားလုံး နှုတ်တိုက် ကောင်းကောင်း ရွတ်နိုင်တယ်။
မိဘတွေ ဆင်းဆင်းရဲရဲ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီး မွေးလာတဲ့ ကလေးမတွေ အဟာရ ချို့တည့်လို့ မှတ်နိုင်စွမ်း ညံတာလားတော့ မသိဘူး။
အိမ်မှာ နှစ် အနည်းငယ် နေလာတာ အဆင်ပြေနေပြီး သူတို့ အိမ်ကလည်း မခေါ်ချင်ဘူး သူတို့ပုံတွေ သားသားနားနား ဖြစ်လာလို့.. အဖျက်က ၀င်တယ်။ အိမ်နားက သူများအိမ်မှာ ကပ်နေတဲ့ အိမ်ဖော်လိုမျိုး ခိုင်းတဲ့ ကောင်လေးတွေ ရီးစားစာ ပေးတယ်။ စာမဖတ်တတ်တော့ ပြသနာ စာယူထားပြီး မဖတ်တတ်.. လူတကာလိုက်ဖတ်ခိုင်း အိမ်ရှင်က လွဲရင်ပေါ့.. စာဖတ်ပေးရတဲ့ လူကလည်း အိမ်ရှင် ပြသနာ မတက်ရလေအောင် ပြန်ပြောပြတော့ ပေါ်ကုန်ရော… စာထဲမှာ ခိုးမယ် ထွက်ပြေးမယ် စုံနေတာဘဲ။ ဖတ်ရတာတောင် လန့်လာတယ်။ တော်ပါပြီ သံယောဇဉ်တော့ ရှိတယ် ဆက်မထားရဲတော့ဘူး။ သူလည်း လစ်တဲ့ အချိန် ရှိလို့ ရီးစားခိုးထားတာ ဆိုတော့ ကိုယ်မသိတဲ့ အချိန် တချိန်မှာ မဖြစ်သင့်တာ ဖြစ်ပြီး နောက်ဆက်တွဲ မရှင်းပေးနိုင်ဘူး။ ကိုယ့်ဟာကို နေတာ အေးချမ်းပါတယ် ဆိုပြီး ပြန်ပို့လိုက်ရတယ်။ အသက်ကလေး ရလာရင် လက်တည့်စမ်းချင်တာနဲ့ ချစ်လို့ ကြိုက်လို့ ယူမယ် ဆိုရင် အိမ်ရှင်နဲ့ ဆွေးနွေးပြီး တင့်တောင့်တင့်တယ် ယူလို့ရနိုင်တဲ့ အနေအထားမျိုး ရှိနေရဲ့သားနဲ့.. မတွေးတတ်တာပေါ့လေ။
နောက်ရှိသေးတယ်။ အိမ်မှာ နှစ်နည်းနည်း ကြာကြာ နေလို့ ရွှေတွေ ဘာတွေ ဆင်တယ်။ အိမ်ကို ရောက်လာတဲ့ လူတိုင်း ရွှေဝယ်ဆင်ပေးလိုက်တာနဲ့ ပြသနာ မျိုးစုံ ဖြစ်တယ်။ အိမ်မှာ ဆက်နေမဲ့ သူမျိုးကျတော့ စိတ်ကောက်ပြီး မလိုချင်ဘူး မယူဘူး ဆိုပြီး ပြန်လာပေးတာမျိုး.. တချို့ကျတော့ ပြန်မယ် ဆိုပြီး ပြန်ကြတယ်။ အိမ်ရောက်လာလို့ ၁နှစ်လောက် ရှိပြီ ဆိုရင် ရွှေဆင်ကတည်းက နောက်ထပ် ၁နှစ် နေမှ အပိုင်ရမယ် မနေရင်တော့ အဲဒါ မပိုင်သေးဘူး အခု ၁နှစ်စာ အတွက် ကြိုတင် ဆု ချတာ ၀တ်လို့ရအောင် သဘောတူညီချက်နဲ့ ပေးလိုက်တာ ဆိုတော့.. အချိန်မစေ့သေးဘဲ ပြန်တော့ ပြန်ထားခဲ့ရတာမျိုး.. အိမ်မှာ ရွှေဆင်တာနဲ့ လစ်တာဘဲ.. ရွှေနဲ့ မထိုက်တန်လို့ များလား တွေးမိတယ်။
ရွှေဆင်တယ် ဆိုတာကလည်း ပိုက်ဆံ က မိဘတွေက လစာ ထုတ်ယူကြတော့ သူတို့ လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံ မထိန်းသိမ်းကြဘူး။ ပိုက်ဆံ အဖြစ် အပိုဆု ပေးရင် ငွေကြေးတန်ဖိုးက သိတဲ့ အတိုင်းဘဲ ရွှေဆိုတာ တန်တဲ့ အချိန်မှာ တန်သလောက် ပေးလိုက်ရင် နောင်တချိန် အိမ်ထောင်ကျလို့ ထုခွဲရောင်းချရင် အဲဒီ ရွှေတန်ဖိုး နဲ့ အညီ ပိုက်ဆံ ဖြစ်အောင် ၀ယ်ပေးဖြစ်တာ.. ယခု လက်ရှိကတော့ အိမ်မှာ ဘယ်သူမှ မခေါ်မထားဘူး။ သူငယ်ချင်း တယောက်က ပြောတယ် နင်တို့ က အကောင်းလွန်လို့ နင်တို့ကို အနိုင်ယူကြတာ ငါတို့ဆို စလာကတည်းက ပုံစံပေးတာ ဘယ်သူမှ ဘာမှ ပြန်မပြောဘူး ပြားပြားဝပ်ဘဲ.. တော်ပါပြီ သူများ ကို အနိုင်ကျင့်ပြီး ၀ဋ်ကြွေးတွေလည်း ထပ်မယူချင်ဘူး ကျေနပ်ရင် လုပ် မကျေနပ်ရင် သွား.. သူတို့ အကြွေးရှိလို့ လာလုပ်တာ အကြွေး မကုန်သေးဘဲ တဘတ်ရိုက် ယူသွားလည်း သူတို့ ဘယ်လောက်မှ အသုံးမခံဘူး နောက်သံသရာ မကြောက်လို့ ယူတာ ယူပလေ့စေလို့ သဘောထားလိုက်တယ်။
ကွန်မန့်တွေ ဖတ်ကြည့်တော့ အတွေးတွေ ပိုပြီး အမျှင်တန်းသွားတယ် …
မြန်မာပြည်မှ မြန်မာအိမ်ဖော်များအပေါ်တွင် ဒီလိုလေး အမြင်ပြောင်းကြည့်ရင် မကောင်းပေဘူးလား
သူတို့တွေဟာ သူများတွေမလုပ်ချင်သော၊ မလုပ်နိုင်သော အိမ်အလုပ်များကို အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရပ်တစ်ခုအနေဖြင့် လုပ်ကိုင်နေကြသော ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများသာဖြစ်ပြီး ၄င်းတို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာများသည် ၄င်းတို့တာဝန်သာဖြစ်ကြောင်း၊ အသိဥာဏ်နုံနဲ့သူများ ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေပါမယ်၊ ဒါပေမယ့် သူတို့ကိုပေးအပ်ထားသော လုပ်ငန်းပြီးဆုံးခြင်း၊ မပြီးဆုံးခြင်း၊ မိမိ၏ အကျိုးစီးပွားကို ဖျက်စီးခြင်း၊ မဖျက်စီးခြင်းနှင့်သာ တိုင်းတာဆုံးဖြတ်ရင်တော့ဖြင့် ကိုခိုင်ပြောခဲ့သလို မေတ္တာတွေ..သစ္စာတွေကို .. စီးပွားရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်တာမှာ.. အခြေခံထားပြနေပြန်တယ် ဆိုတာမျိုးမရှိတော့ဘဲ နှစ်ဦင်္းနှစ်ဖက် အဆင်ပြေမယ်လို့ မြင်မိပါတယ်..။ ခုများတော့ ကြားရ ကြားရ နားဝမချမ်းသာ ဖြစ်နေပါတယ်။ ကိုယ့်မြန်မာလူမျိုးများကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း(၆၀)ကျော်တုန်းက နိုင်ငံခြားသားတွေက နှိမ်ခဲ့တယ်၊ ခုတော့ ကိုယ့်မြေ၊ ကိုယ့်ရေမှာ ကိုယ့်လူမျိုးတွေအချင်းချင်း………………….
မဝေရေ အိမ်အကူခေါ်ချင်ရင် ကျနော် လိပ်စာတခုပေးပါမယ်။ ကျနော့မိတ်ဆွေ တွေက အဲဒီကခေါ်တာ။ သူတို့ပြောပြလို့ သိရတာပါ။ မဝေပြောသလောက် ဈေးမများပါဘူး။ အနိမ့်ဆုံးက သုံးသောင်း နောက်ထပ် အရည်အချင်းလိုက် ပေးရ တယ်လို့ပြောပါတယ်။ ညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ်။ လိပ်စာက နွယ်ရိုးကုမ်ပဏီ၊ မြေနီကုန်းမှာရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ ဖုံးက- 516970၊ 708694၊ 511703။ ကျနော်က ကြော်ညာတာမဟုတ်ဘူးနော်။ အဆင်ပြေစေချင်လို့ ။ သတင်းပေးတာပါ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုကျော်မွန်ခန့် …
မနေ့ကမန်းထားတာ ဘယ်ပျောက်သွားပါလိမ့်အရှည်ကြီးပဲ… ဟင့်